काठमाडौं। यौन सबै सजीव प्राणीको आवश्यकता हो। यौन सम्बन्धले मानव जीवनमा धेरै महत्त्व राख्दछ वैवाहिक जीवनमा यसले धेरै प्रभाव परेको हुन्छ। नेपाली समाजमा विवाहपश्चात् मात्रै यौन सम्पर्कलाई वैधता दिइन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय विवाह अघि पनि मानिसहरू प्रेम र यौन सम्बन्धलाई सँगै लैजान्छन्।
यौनबारे नेपाली समाजमा निकै भ्रामक कुराहरू फैलाइएको छ। यौन सम्पर्क अगाडी हुने मायाको अभिव्यक्तिले यौन जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने ज्ञान जोडीहरूलाई छैन। त्यसैले पनि अक्सर जोडीको यौन जीवन सुखमय छैन। हाम्रा विद्यालयमा अझै पनि यौन शिक्षा दिँदा धेरै छात्राहरू विद्यालय नै आउँदैनन्। जसबारे केही तथ्य, यथार्थ र भ्रम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
यौन सम्बन्धको बेला समयले निकै महत्त्व राख्दछ। धेरै पुरुष आफू यौन सम्पर्क राख्दा निकै कम समय टिकेको र छोटो समयमा नै स्खलन भएको भनी हीनता बोध गर्दछन्। र तिनका पार्टनरको गुनासो हुन्छ मलाई मज्जा नै नआई उसलाई पुग्यो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा राखिएका यौन सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि अक्सर यस्ता गुनासो आइरहेको हुन्छ। यसको कारण उनीहरूले आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन कि भन्ने कुराले पिरोल्छ।
तर, एक सर्वेक्षणका अनुसार अधिकांश मानिसको यौन समय करिब बराबर नै रहन्छ। अर्थात् अधिकांश जोडीहरू यौन सम्बन्धमा १२ मिनेटसम्म टिक्छन् र सेक्स टोय बनाउने एक कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणमा ४३२ जोडी संलग्न थिए जसले २ हजारभन्दा बढी समय यौन सम्पर्क राखेका थिए। उनीहरूसँग उनीहरूको यौन जीवनको बारेमा सोध्दा एक अचम्मको तथ्य फेला परेको थियो।
१२ मिनेट मात्रै ? : सर्वेक्षणको नतिजाले अधिकांश जोडी यौन सम्पर्क राख्दा केवल १२ मिनेट टिक्ने गरेको देखाएको छ। १२ मिनेट निकै कम समय भएको लाग्दछ। तर, अध्ययन प्रतिवेदनमा यो केवल पेनिट्रेसनको मात्रै समय हो कि अथवा फोरप्लेसहितको समय हो भन्नेबारे भने उल्लेख गरिएको छैन।
क्लाइमेक्स समयः यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार महिलालाई क्लाइमेक्समा पुग्न करिब १२ मिनेटको समय लाग्छ। त्यस्तै, एक अर्को शोधले भने यौनको पूरा समय ३० मिनेटभन्दा कम भएमा महिला चरमोत्कर्षमा पुग्न नसक्ने देखाएको छ। हो, अधिकांश नेपाली महिलाहरूले यस कारण चरम यौन सन्तुष्टि लिन सकेका छैनन्।
समयभन्दा अनुभव महत्त्वपूर्णः कुनै पनि जोडीको सम्बन्ध प्रगाढ बन्न उनीहरूको यौन जीवन पनि राम्रो र स्वस्थ हुनु जरुरी छ। तर, यौन सम्पर्कका क्रममा समयमा भन्दा यौन अनुभवमा ध्यान दिनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले नै यौनलाई आनन्दमय बनाउन सक्छ।
महिलाले झुट बोल्छन्ः यौन मामिलामा अर्को रोचक तथ्य पनि छ। त्यो हो यौन सन्तुष्टिबारे महिलाहरूले झुट बोल्छन्। हो, यौन सम्बन्धमा महिलाहरू त्यति खुलेर कुरा गर्दैनन्। उनीहरू यौन सन्तुष्टिको विषयमा झुट बोल्ने गर्छन्। उनीहरू आफू सन्तुष्ट नभए पनि आफ्नो पाटनरसंग जुटो बोल्ने गर्छन्। उनीहरूको अक्सर जवाफ हुन्छ। हजुर मलाई मजा भयो। तर महिलाहरू साँच्चीकै यौन सन्तुष्टिको कारण नभई कतिपय अवस्थामा पार्टनरको रेस्पेक्ट र उनीहरूलाई गरेको प्रेमको कारण पनि यस्तो झुटो बोल्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो।
कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनले महिलाहरू यौन सन्तुष्टि नपाए पनि आफ्नो यौन जोडीसँग आफूले सन्तुष्टि प्राप्त गरेको भनी झूट बोल्ने फेक अर्गाजम गरेको देखाइसकेका छन्। तर, उनीहरू किन यस्तो गर्छन् त भन्ने प्रश्नको जवाफमा ती शोध अनुसन्धानले देखाएका छन्ः
पुरुषको अहम्ः महिलाको फेक अर्गाजमको पछाडि धेरै कारण हुन्छन्। त्यसमध्ये एक हो पुरुषको अहम्। पुरुषहरू महिलालाई बेडमा सन्तुष्ट गर्ने कुरालाई आफ्नो अहम् अथवा इगोको रूपमा लिन्छन्। त्यसैले पुरुषको अहममा ठेस नपुगोस् भनेर उनीहरू झुट बोल्छन्। पुरुषहरू बेडमा पार्टनरलाई यस्तो भ्रमित पार्छन् कि उ नै संसारको सबैभन्दा बलवान् शक्तिशाली र यौन सन्तुष्ट दिने व्यक्ति हो। उनीहरूको यही भावनामा डराएर, रेस्पेक्ट दिन, माया दर्शाउन महिलाहरूले आफूलाई व्यग्र मजा नआएता पनि सन्तुष्ट भएको झुटो बयान दिन्छन्।
अन्योलमा रहनुः केही महिलाले आफू अर्गाजममा नपुगे पनि आफूले अर्गाजममा नपुगेको रियाक्सन देखाएमा पुरुष पार्टनरले त्यसलाई कुन रूपमा हेर्छन् भन्ने विषयमा अन्योलमा रहन्छन्। यही अन्योलका कारण उनीहरूले अवास्तविक हाउभाउका साथ फेक अर्गाजमको सहारा लिने गर्छन्।
मूड नहुनुः महिलाहरू कतिपय अवस्थामा यौनका लागि तयार नभएका हुन सक्छन्। जस्तोको लामो यात्रापछि, बिरामीपछि निको भएको अवस्थामा महिनावारी नरोकिँदै, यौनांगमा कुनै घाउ भएमा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै समस्या आएको अवस्थामा यदि यौन सम्पर्क भइहाले पनि उनीहरू चरममा पुग्न सक्दैनन्। तर, उनीहरू आफ्नो पार्टनरको विश्वासमा कमी नआओस् भन्ने हेतुले झूटको सहारा लिन्छन्।
नर्भस हुनुः पुरुषले कम्फोर्टेबल महसुस गरे पनि महिलाले कम्फोर्टको अनुभूति नगरी चिन्तित हुन सक्छन्। यसको प्रभाव यौनमा पर्छ र महिलाले आफूले आनन्द नलिए पनि पार्टनरको अनुभवलाई राम्रो बनाइदिन आफू खुसी र सन्तुष्ट भएको फेक अर्गाजम गर्छन्।
दबाबः कतिपय अवस्थामा पुरुषले आफू चरममा पुग्न लाग्दा महिलालाई पनि चरममा पुगे/नपुगेको बारे सोध्ने गर्छन् र क्लाइमेक्समा जान भन्दछन्। तर, यौन सन्तुष्टि होस् भनेर हुने वस्तु होइन। यो जबरजस्ती गरेर भन्न लगाउने बानीको दबाबमा उनीहरूले झुटको सहारा लिन्छन् र मज्जा आएको आभास गराइदिन्छन्।
शारीरिक सम्बन्धलाई सुखमय बनाउने हो ?
शारीरिक सम्बन्धले मानव जीवनमा विशेष महत्त्व राख्दछ। अझ वैवाहिक जीवनमा यसले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि आफ्नी जीवनसाथीको यौनसम्बन्धी अनुभूतिलाई सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने अर्गाजम महसुस गराउन सहयोग गर्नुहोस्। केही तरिका यसप्रकार छन् जसले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छन्ः
फोरप्लेः चरम आनन्दका लागि फोरप्लेको अहम् भूमिका रहन्छ। उनीहरूसँग यौनसम्बन्धी कुराकानी गर्ने, रोमाञ्चक वातावरणको सृजना गर्ने, शरीरका विभिन्न भागलाई सुमसुम्याउने अथवा चुम्बन गर्ने आदि क्रियाकलापले महिलालाई उत्तेजित बनाउन सकिन्छ। विशेष गरी, फोरप्लेले महिलालाई उत्तेजित गर्दछ जसका कारण योनिमा तरल पदार्थ आउनुका साथै योनि खुल्न पनि सहयोग गर्दछ। यसले यौन क्रिया र चरम आनन्दमा निकै सहयोग गर्दछ। यदि यी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरीकन सिधै यौन सम्पर्क गर्नुभयो भने महिलालाई असह्य पीडा हुन्छ। अनि उनले माथि भनेजस्तै झुटको सहारा लिन्छिन्। अनि यदि तपाई महिला पार्टनर हुनुहुन्छ भने पुरुषलाई उत्तेजित पारेर मात्र तयार हुनुहोस्।
क्लिटरिस प्लेः चरम आनन्दका लागि क्लिटरिस प्ले अर्थात् योनिको भागलाई खेलाउनुले पनि सहयोग गर्दछ। हातले योनिलाई चलाउनु अथवा मुख मैथुन गर्नाले महिलाहरू उत्तेजित हुन्छन् जसले उनीहरूलाई अर्गाजममा पुर्‍याउन सहयोग गर्दछ। यसो गर्दा यौन सम्पर्कको लागि पनि सहज हुन्छ।
यौनसम्बन्धी कुराकानीः कतिपय जोडी यौनसम्बन्धी कुरा गर्न हिचकिचाउँछन्। तर, यौनसम्बन्धी कुराकानी गर्नाले एक अर्काको धारणा बुझ्न सकिन्छ। दुवैले आफूलाई मन पर्ने यौन आसनको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ र दुवैको रुचिलाई पहिल्याई महिलालाई चरम आनन्दको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ। तपाई पार्टनरको लागि सबथोक बन्न तयार हुनुहोस् अनि मात्रै पार्टनरको मन बहकिँदैन।
सुरक्षित सम्बन्धः यौन कल्पनालाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो जोडीलाई सुरक्षित यौन सम्बन्धको लागि भरोसा दिलाउनुपर्छ ताकि उनीहरूमा कुनै किसिमको लाज र संकोच नहोस् र उनीहरू सहज महसुस गर्न सकुन्। यदि महिलाहरूले कुनै पनि कारणले असहज महसुस गरे भने चाहेर पनि उनीहरूलाई चरम आनन्द प्रदान गर्न सकिँदैन।